Maxaa ka jira eedeymo la xiriira raashin mucaawino ah oo la gatey?. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Maxaa ka jira eedeymo la xiriira raashin mucaawino ah oo la gatey?.
Maxaa ka jira eedeymo la xiriira raashin mucaawino ah oo la gatey?.
Maamulka gobolka Gedo ayaa soo jeediyay eedeymo la xiriira raashin gargaar ah oo gobolkaa loo waday oo la musuqmaasuqay.
Raashinkaa ayaa waxaa wararku sheegayaan in ay bixisay dawlada dalka Turkiga. Maamulka Gedo ayaa sheegay in raashinkaa la geeyay suuqyada Kismaayo oo halkaa lagu sii iibiyay walow aan iib loogu tala galin ee uu ahaa raashin mucaawino ah.
Maamulka Gedo ayaa tilmaamay in raashinka ay iibsadeen saraakiil kasoo jeeda gobolka Gedo iyo guud ahaan Jubaland.
Axmad Buule Canjeex oo ah guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa warbaahinta u sheegay in maamulkiisu hayo caddeymo muujinaaya in raashinkaa suuqa lagu kala iibsaday ee uusan soo gaarin dadkii loogu tala galay.
Si kastaba ha ahaatee masuuliyiinta lagu eedeeyay musuqaa oo uu ka mid yahay Maxamuud Sayyid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka Jubaland isla markaana asaga qudhiisu kasoo jeeda Gedo ayaa gaashaanka ku dhuftay arintaa isla markaana beeniyay.
Maxamuud Sayyid Aadan wuxuu sheegay in raashinkaa la gaarsiiyay Gedo oo Doolow lagu qeybiyay isla shalay oo Isniin ahayd.
Qeybo kale oo Soomaaliya ah ayaa dhawaan la sheegay in raashin gargaar ah suuqyada la geeyay gaar ahaan Muqdisho oo raashin loogu tala galay barakacayaal iyo qaxootiga Yemen suuqayada la geeyay laguna sii iibiyay.
Previous articleGargaarka Biniaadanimo oo ay wax ka bedeleyso dawladda dalkaasi Canada.
Next articleSaldhigyo ay gudaha Liibiya ku lahaayeen ISIL oo markii ugu horeeysey Mareykanku duqeeyeen.